Mkpuchi - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Mkpuchi bụ a na-aga n'ihu film na-ntekwasa n'elu a na-echebe ma ọ bụ mma ihe na nwere ike ike mmasị ka mkpuchi. Ọ bụ viscous mmiri mmiri, na-emekarị ka nke resin, mmanụ, na emulsion na ma ọ bụ na-enweghị pigments, fillers, nwekwara, organic solvents ma ọ bụ mmiri.
Mgbe a ogologo oge nke mmepe, mkpuchi bụ karịsịa mgbagwoju. Iji ikwado management na ojiji, dị iche iche nhazi ọkwa ụzọ nke coatings a kpụrụ na ya mara. Ugbu a, ọtụtụ nakweere mkpuchi nhazi ọkwa ndị dị ka ndị:
Dị ka di iche iche nke film na-akpụ ihe onwunwe, mkpuchi nwere ike kere n'ime alkyd resin mkpuchi, polyurethane mkpuchi, emulsion mkpuchi, nitrolacquer, acrylic mkpuchi, epoxy resin mkpuchi, wdg
Dị ka dị iche iche ojiji, ọ ga-ekewa ese lacquer, osisi lacquer, akpakanamde mkpuchi, okporo ụzọ agba, mmiri agba, iko mkpuchi, ígwè mkpuchi, wdg
Dị ka dị iche iche ihicha ụzọ, ọ ga-ekewa ikuku-ihicha agba, stoving ghọọ, UV n'ịgwọ mkpuchi, wdg
Dị ka n'ụdị mkpuchi, ọ ga-ekewa uzuzu mkpuchi, mmiri mmiri mkpuchi.
Dị ka ọrụ nke mkpuchi, ọ ga-ekewa eduzi agba, egbochi ihe agba, mgbochi nchara agba, okpomọkụ na-eguzogide agba, wdg
Longxin enye ngwá ọtụtụ mkpuchi rụpụta dị ka AkzoNobel, MAYDOS, Nippon agba na na.
Nwere ike ikwu ngwá maka mkpuchi mmepụta: YS usoro haịdrọlik atọ ala na nkume igwe nri, WSJ usoro kwụ esịtidem-obi jụrụ full ọrụ bead na nkume igwe nri, WSD usoro ngwa ngwa eruba ájá na nkume igwe nri, WSS usoro kwụ na na nkume igwe nri, WSK usoro High-viscosity ọkasị mma vasatail bead na nkume igwe nri
Product Line: mkpuchi / ahịa ọgwụ / pesticide / ọkụkụ ngwaahịa akara